Ben J : « fanehoana fitiavan-tanindrazana ny fambolen-kazo » – Blaogin'i Voniary
Nanatanteraka fambolen-kazo tany Benasandratra Fenoarivo ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA tamin’ny 25 Martsa 2017 lasa teo. Nanotrona azy ireo tamin’izany koa ny vondrona Izany Ka Malagasy ao amin’ny Facebook sy ny mpianatrin’ny EPP Benasandratra. Nanararaotra nitafatafa tamin’ny filohan’ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA, Ben J, aho tamin’izay. Indro ary taterina aminao eto izany antsafa izany.
Voniary : Inona no tanjon’ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA?
Ben J : Fanovana toe-tsaina amin’ny alalan’ny hetsika sy fanentanana isan-karazany no tena tanjonay ao amin’ny fikambanana. Nofintiniko ao anatin’ilay vazo « EKAH » iny moa ny fototra ijoroan’ny fikambanana. Tianay entanina manokana ny tanora mba handray andraikitra fa tsy hiandry sy hitazam-postiny manoloana ny zavamisy. Ohatra amin’izany izao ny fahasimban’ny tontolo iainana eto amintsika, ny fitotonganan’ny fiarahamonina na koa ny fahaverezan’ny soatoavina Malagasy. Misy hetsika azo atao anarenana an’ireo fa tsy tokony hitazam-potsiny isika, anisan’izany izao fambolen-kazo izao.
V : Inona tokoa no antony nisafidiananareo manokana ny fambolen-kazo ?
BJ : Amiko, fihetsika lehibe maneho fitiavan-tanindrazana ny fambolen-kazo. Betsaka ny olona tezitra rehefa atao hoe tsy tia Tanindrazana. Ny mpanao rap gasy ohatra betsaka mitonona ho tia Tanindrazana any anaty « texte-ny » any. Fa tsy tokony ventiventesina toy izany fotsiny ilay izy fa arahina asa. Amin’izao fotoana izao efa miharipaka ny ala eto Madagasikara noho ny fampiasana arina sy kitay. Ny olona iray izany isaky ny mampirehitra saribao dia tokony ho tonga saina hoe misy hazo notapahina tany nahazoana an’ireto ka mila mamboly hazo anoloana azy. Eritrereto fotsiny hoe taloha nierehareha ery ny Malagasy niteny hoe « oviana vao ho ritra ny ala atsinanana ? ». Amin’izao efa andalam-paharitana mihitsy ny ala atsinanana. Ka mba hitondra ny anjara birikinay amin’ny famerenana ny ala no anton’izao hetsika izao. Marihako moa fa zana-kazo 1000 isa, kesika sy ravintsara, no novolena teto.
V : Fa maninona no aty Fenoarivo ?
BJ : Ny antony voalohany dia anisan’ny efa mihangazana ity faritra ity raha momba ny ala no resahina. Ny faharoa dia mba afahana manara-maso ireto zana-kazo nambolena ireto. Efa nifanaraka tamin’ny tompon-tany izahay fa hisy olona avy aminay hanondraka sy hanara-maso manokana ny zana-kazo isaky ny tapa-bolana. Raha sendra tsy afaka moa izahay dia misy olona avy amin’izy ireo handray an-tànana izany. Tiako marihana manokana koa ny antony nitondranay ireto ankizy mpianatry ny EPP ireto. Miainga avy any amin’ny fotony manko ny fanabeazana. Rehefa voaentana manomboka amin’izao fahakeliny izao ireto ankizy ireto hoe ilaina ny mamboly hazo dia ho zary lasa fahazarana tsara ao aminy izany ka ho lasa toe-tsaina tsara entiny mandrapaha-lehibe.
V : Inona ny hetsika manaraka hotanterahin’ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA ?
BJ : Ny tetikasanay ato ho ato izao dia ny fikarakarana adihevitra na « débat » ho an’ny tanora. Izany hoe omena sehatra ny tanora mba hifampiresahany mikasika ny fampandrosoana, ny tontolo iainana sy lohahevitra manan-danja maro isan-karazany.
BJ : Ho an’ny mpamaky ny blaogin’i Voniary : aleo isika tsy variana ao ambadikin’ny « écran » ao e ! Mba midina « sur terrain » ! Asehoy amin’ny asa fa tia Tanindrazana ianao. Mandraisa anjara amin’ny fampandrosoana maharitra ny firenenao. Mba manaova zavatra hitoetra ho an’ny taranaka e !
Ben J EKAH, EKAH Madagasikara, fambolen-kazo antananarivo, Fampandrosoana lovainjafy, fandraisana andraikitra, fikajiana tontolo iainana, fitiavan-tanindrazana
Ben J : « Amin’ny alalan’ny Rap gasy no ampitako hafatra hanovana ny toe-tsain’ny tanora »